हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुची हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो (प्रधानमन्त्रीको संवोधनको पूर्णपाठसहित) | Makalukhabar.com
लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाँचबर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं । जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मुल कानुन– संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सवैमा पाँचौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
– त्यस्तो दिवस, जसले नेपाली जनसंख्याको सयौं थुङ्गा फुलहरुलाई एउटै मालामा उनि विविधतामा रहेको एकताको सन्देश प्रवाह गरेको थियो,
– दशकौंसम्म संघर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन् / बुझेका छन्, तिनकालागि आजको दिन गौरव गाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक विछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीहरुका लागि आजको दिन,स्वतन्त्रता दिवस पनि हो– प्राप्त उपलव्धी प्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, नआम जनतामा अरुची हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
– त्यस्तो गतिशीलता, जहाँप्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ । संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन वेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका अघि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यहीबेला विधिसम्मत ढंगले मिलाउँदै/पन्छाउँदै अघि बढिन्छ ।
– त्यतिखेर मैले संबिधानले आत्मसात गरेका हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र लक्ष्यबारे चर्चा गरेको थिएँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपाइ/हामीले संयुक्त रुपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना भएको उल्लेख गरेको थिएँ ।
– आज म ती प्रतिवद्धतालाई पुनः एकपटक दोहर्याउने अनुमति चाहन्छु । र, सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलव्धिको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
– आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो ।
– यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा– ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा–२०।३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा– २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा– ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
– यस अबधीमा विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू। ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदान समेत वितरण गरिएको छ ।
– नेपालले डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय/व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । हाम्रो लागि यो असाधरण सफलता हो र नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागिसफल उदाहरण हो।
– यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
– पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाईप्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरीका भू–माफियाहरु, राजस्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत निर्मम कार्वाही शुरु गरिएको छ । यो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु। ४ अर्ब २५ करोड विगो माग दावी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
– भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि– खै त रेल, खै त पानी जहाजरु कहाँ छ सुरुङ् खनेको ? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको ? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको ? हामीमा आशा किन जगाएको ?
– मैले आफैंसँग पटक–पटक प्रश्न गर्ने गरेको छु– आधा शताब्दी अघि कलिलै वयमा आफ्ना दौंतरीहरुसँगै घरबार छोडेर हिंडेकोके का लागि ?, जवाफ पाउने गरेको छु– मुलुक बनाउनका लागि । तपाईं हाम्रा साझा सपना पूरा गर्नका लागि । यी सबै संघर्षहरुमा मेरो संलग्नता कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन खुल्ला र निवेदन गरौंला भनेर किमार्थ थिएन ।
– अहिले हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि छ । हाम्रो जनसंख्यामा ३४ वर्ष मुनिको संख्या– ६५.५ प्रतिशत छ । १४ वर्ष मुनीका ३४.८ प्रतिशत किशोर/किशोरीहरुको संख्यालाई कटाउने हो भनेपनि १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका सक्रिययुवासंख्या ३०.५ प्रतिशत छ । ६५ वर्ष माथिका पाकानागरिकको जनसंख्या त जम्माजम्मी ४ प्रतिशत मात्रै छ ।
– मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, आजको आवश्यकता उश्रृङ्खलता र अराजकता हैन, सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता र सहिष्णुता हो । आजको लडाइ लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुदृढ गर्नका लागि हो ।
– पाइला नै नचलाई कसरी दौडनेरु यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिनेरु रुपान्तरण हैनप्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहनेरुविना–मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दा जस्तो बहस/विवादको माहौल किन बनाउने ? अझै पनि ‘हुँदैन/सकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेराकिन लगाउने ?
– काठमाडौ–तराइ/मधेश द्रूतमार्गको निर्माण सरकारको यही कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
– अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्वको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ५० खर्व पुर्याइनेछ ।
– छिट्टै शुरु हुने दशैं/तिहार सहित विभिन्न चाडपर्वहरुको अग्रिम शुभकामना ।
छात्रामाथि यौन शोषण गर्ने पूर्व केन्द्रीय मन्त्री चिन्मयानन्द पक्राउ